GPS Navigator Car Houd Lens
Headsets AR Augmented Realit fiarovan-doha Lens
Hisainana Coating Lenses
Boribory & Aspherical Mitovy amin'ilay family mbola
Sports solomaso andian-dahatsoratra
Safety fiarovan-doha Lens
Ski solomaso Lens
Mitaingina Windproof Lenses
Swimming solomaso Lenses
Safety & Protection solomaso andian-dahatsoratra
Industrial Sendikà Insurance Lenses
Miaramila Goggles solomaso
Medical Eye Protection solomaso
Laser solomaso fiarovana,
Gernel solomaso Series
Mizarazara solomaso Mitovy amin'ilay family mbola
Mitovy amin'ilay family mbola Graphic solomaso
Mangarahara Products Series
Acrylic tokantrano entana
Acrylic trano fandraisam-bahiny fitaovana
Acrylic miseho mijoro
Acrylic asa tanana
Fanahafana REVO Coating
Bobongolo Design & fanaovana
Optical Mirror Nikosokosoka
Optical Lens hamolavola
Profiled surface Nikosokosoka
Iza no mamokatra vokatra?
Ny lehibe indrindra dia Optical entana isan-karazany sy tsy boribory boribory family, VR 3D family, LED family, mangarahara acrylic vokatra ( zavakanto asa, tokantrano sy ny trano fandraisam-bahiny famatsiana, avoaky, lahatsoratra amin'ny fampiasana andavanandro, sns ) , Houd projection family, ny fiarovana fiarovan-doha visors, fanatanjahan-tena family (Ski Goggles Lens, Nilomano family, bicycle fifaninanana family), Sunglasses family, Industrial miaro family, isan-karazany miendrika manokana curved ambonin'ny Mitovy amin'ilay family mbola, vokatra plastika, ary anaty lasitra.
Afaka manome OEM famokarana?
Vitantsika izany. Afaka manao bobongolo orinasa mpamokatra entana, sy ny fanodinana ny famokarana fampidirana tolotra araka ny mpanjifa 'sary na ny santionany.
Na dia afaka ho natao ho antsika?
Antoka, Raha nanome anay ny hevitra sy mifandray masontsivana, dia mandamina sy feno ny antontan-taratasy famolavolana miandry ny fandraisana ho mpikambana. Alohan'ny ny baiko dia Mampianiana famolavolana saran'ny, fa nandritra ny famokarana faobe, dia hiverina ny famolavolana vidin'ny.
Iza asa tanana dia afaka ampiasaina amin'ny famokarana?
Hatanjaho: Mba hisorohana ny vokatra avy rangotra, ratra kely, akanjo, ary mpanohitra ny fiantraikan'ny
Fandokoana: Add loko ao amin'ny akora, hanao ny vokatra amin'ny loko isan-karazany
Electroplating: Alaharo eto ny gradient loko, volafotsy loko rano, miloko isan-loko , Pattern voapetaka, sns fa tsara tarehy ambonin'ny vokany.
Coating: Mampiasa Optical manify vacuum sarimihetsika sy ny teknolojia, tao amin'ny vokatra ambonin'ny voapetaka sarimihetsika manohitra ny UV, AR sarimihetsika, anti tondro sarimihetsika, sns
Ahoana ny amin'ny anjara-raharahany sy ny lahateny santionany?
Sample anjara-raharahany araka ny vokatra manokana, raha lehibe ny famokarana, dia afaka miverina ny santionany Version saran'ny ho anao eo amin'ny vidin'ny amin'ny vokatra.
Taorian'ny santionana dia mba nandoa ny saran'ny pirinty, mpanjifa mandefa antsika Manamarina rakitra / mailaka, araka ny pitsiny ny vokatra, isika, mamantatra andrana mandritra ny maty sy ny proofing fotoana. Sample dika fanaterana dia 5 ka hatramin'ny 10 andro mahazatra. Raha toa ka mila santionany lisitra mba hahazo antoka ny toetra, dia afaka manome anao santionany raha maimaim-poana, dia mila mandoa ny lany fitaterana.
Fandefasana santionany amin'ny TNT , UPS , FedEX , DHL Express.
Ve ato aminareo lasitra ho an'ny rehetra, nampiseho ny vokatra?
Ny sary ao amin'ny tranonkala dia novokarin'ny orinasa, ihany no natolotra ho toy ny boky, raha te-hahafantatra bebe kokoa azafady antsipiriany mangataka ny mpivarotra.
Mandra-pahoviana no lasitra vokatra fe-potoana?
Araka ny habeny sy ny pitsiny ny vokatra mba hahafantarana iray napetraka ny bobongolo fanokafana ny fotoana sy ny fotoana farany, araka ny fepetra takiana ny didy sy ny mpividy mba hijery ny lasitra lavaka isany sy bobongolo mandika isa. Rehefa avy hamaritana ny santionany, na fanaovana sary, General bobongolo orinasa mpamokatra entana tsingerin'ny ny 20-30 andro.
Inona no atao hoe ny MOQ?
Ny ambany indrindra dia be dia mba 3K, kely koa izahay handray sarotra be ny baiko, fa ny vidiny dia ho ambony kokoa. Raha toa ny baiko dia goavana, dia afaka mahazo tsara manta sy hampihenana ny vidin-javatra ara-nofo fitantanana ny vola lany, mba hahafahantsika manome vidiny mora kokoa.
Mandra-pahoviana no fanaterana ny fotoana?
Araka ny bobongolo fe-potoana, mba be sy ny fandaharana ny filaminana, dia Delivery isika ankapobeny ny vokatra ao anatin'ny 20 andro aorian'ny fanaovana ny mold.Delivery ny vokatra. Ny tsara indrindra ao anatin'ny firaketana an-tsoratra dia 50000 1day for VR family
Inona no fomba fanaterana?
Inona ny certifications?
ISO9001, SGS fitiliana tatitra sy ny maro hafa, izay ho azo antoka ny vokatra rehetra famokarana fandrosoana hampandeha tsara.
inona ny fandoavam-bola?
Isika dia mpikambana ao amin'ny Alibaba Trade Assurance izay tolotra vaovao omen'ny Alibaba, miaro ny mpividy ny mpamatsy vola mba hahazoana antoka mpamatsy manatanteraka ny adidiny mikasika ny filaminana sy ny fanaterana vokatra tsara. Azonao atao ny mandoa vola amin'ny alalan'ny fandoavam-bola amin'ny Alibaba, na mampiasa paypal. Large entana no novana T / T 30% petra-bola karama, ny fifandanjana karama hamely boky p.
About The Fandefasana Information
Afaka mampiasa ny mpandraharaha ny sambo?
Eny, azonao atao. Izahay efa niara-niasa tamin'ny forwarders maro. Raha toa ka mila, dia afaka fahazoan-dalana hidirana ny sasany forwarders ho anao ary afaka mampitaha ny vidin-javatra sy ny asa.
Ny seranan-tsambo ny sambo?
Raha te hitsidika ny orinasa, dia seranam-piaramanidina iraisam-pirenena akaiky indrindra na seranam-piaramanidina ao an-toerana?
Shenzhen Bao'an International Airport no akaiky indrindra seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Guangzhou- Baiyun dia kely lavitra. Masìna ianao, lazao aminay eo alohan'ny fitsidihana, dia manaova fotoana mpamily haka anao.
About Order ny paika
1, Enquiry-Professional teny nindramina
2, hanamafy ny vidiny, mitarika ny fotoana, sary, fandoavam-bola teny etc.
3, Sales handefa ny Proforma faktiora amin'ny tombo-kase.
4, mpanjifa hanao ny fanonerana ho an'ny petra-bola na ny santionany saran'ny ary handefa anay Banky rosia.
5, voalohany Production Stage-Ampahafantaro ny mpanjifa fa efa nahazo ny fandoavam-bola, ary hataoko ny santionany araka ny fangatahanao, maniraka anareo sary na ny santionany mba hahazoana ny fankatoavana. Rehefa avy sitraka, dia mampahafantatra fa isika dia handahatra ny famokarana sy hampahafantatra ny fotoana tombanana.
6, Afovoany famokarana-handefa sary mba hampisehoana ny famokarana tsipika izay hitanao ny vokatra eo. Manamafy ny tombanana fotoana fanaterana indray.
7, End Production-Mass famokarana vokatra sary sy ny santionany hirahiko ho aminareo noho ny fankatoavana, dia afaka ihany koa ny antoko fahatelo mandamina Inspection.
8, Mpanjifa hanonitra mahay mandanjalanja ary handahatra ny fandefasana entana.
9, Order azo hoe "farany", rehefa mandray ny fananana sy manome fahafaham-po aminy.
Feedback ho antsika momba ny Quality, Service, Market Feedback sy Soso-kevitra. Ary azontsika atao tsara kokoa.
Our Mahatsara azy:
isika dia fanamboarana. Manana lasitra feno sy mandeha ho azy vokatry ny fitaovana, dia miantoka ny fahafahana ananantsika mba hanatanteraka ny fandaharam-potoana ho an'ny famokarana lahateny marim-potoana.
ananantsika mihoatra ny 10-taona ity traikefa orinasa. Midika izany fa isika dia afaka mijery mialoha ny olana noho ny baiko sy ny famokarana. Noho izany, dia ho azo antoka ny tsoahana ny toe-javatra ratsy mety hitranga.
Tondroy manondro Service
misy varotra maneho iza no hanompo anao amin'ny nanontany ny vokatra nalefa avy. Nandritra ny dingana, ianao fotsiny mila hiresaka aminy noho ny olana rehetra sy ny lalana mamonjy fotoana be.
isaky ny baiko, dia ho henjana fisafoana ataon'ny departemanta ny QC alohan'ny nandefa. Ny toetra sy ny toe-javatra ratsy dia ho nisoroka ao anatin'ny varavarana.